Image caption Kooxaha gooni u goosadka ee kusugan bariga dalka Ukraine
Homaaiyayaasha dalalka warshadaha leh ee G7 ayaa isku raacay in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu xoojinayo cunna qabateynta ka dhanka ah Ruushka, oo ay ku eedeynayaan siisocoshaha xiisadda sii adkaaneysa ee dalka Ukraine.
Warqoraal ah oo ay soo saareen, waxa ay ku sharaxeen inay aad uga walaacsan yihiin wax ay ku tilmaameen dadaalka Ruushka ay ku taageereyso kooxaha gooni u goosadka ee deegaanada Bariga Ukraine.
Sidoo kale, hogaamiyayaasha waxay bogaadiyeen tallaabooyiinka xadidan ee Ukraine ay kula dhaqmeyso kooxaha hubeysan ee kusugan bariga dalkaasi.
Dhanka kale, Maamulka Dalka Ukraine ayaa sheegaya in kooxo taageersan Ruushka ee ku sugan magaalada Sloviansk ee bariga dalkaasi ay qafaasheen bas siday kooxda caalamiga ah ee Jarmalka uu hogaaminaayo ee kormeeraya arrimaha meleteriga.
Kooxdan waxaa wehliyay xubno kamid ah maamulka reergalbeedku ay taageerayaan ee Ukraine.
Kormeerayaasha waxey qeyb ka yihiin howlgalka ay halkaasi kawadaan golaha iskaashiga iyo amniga ee midowga Yurub.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in lagu hayo xarunta amniga ee Sloviansk, ayna socdeen wadahadalo lagu siideynayo.
Mid ka mid ah hogaamiyayaasha tageersan Ruushka ayaa tilmaamay in sababta ay u afduubteen ay tahay inuu la socday xubin kamid ah sirdoonka Ukraine.
Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Jen Psaki, ayaa sheegtay inaan la aqbali Karin in afduub la sameeyo bariga dalkaasi, waxayna ku baaqday in sidegdeg ah loo siidaayo kormeerayaashaasi.
Image caption Sawirkan waxaa ka muuqdo ciidamadii Ruushka ee 2008 ka qeybgalay dagaalkii Joorjiya oo sanadkan 2014 ka kusugan bariga Ukraine